खेलकुद समाचार Archives - Page3of6-
सुनिल चौधरी, झुम्का,चैत्र २४ । बिध्यार्थिहरुमा खेलकुद बिकास गर्न रामधुनी नगरपालिकाले आईतवारबाट बिध्यालय स्तरीय प्रतियोगिता सुरु गरेको छ । नगरका सामुदायीक र संस्थागत बिध्यालयहरुको सहभागीतामा रामधुनी वडा नं. ९ अन्तर्गत रहेको धुरहा फिल्डमा बिभिन्न बिधा अन्तर्गत खेलकुद सञ्चालन गरेको...
सुनिल चौधरी झुम्का,फाल्गुन ४ । संस्थागत बिध्यालयको छातासंगठन रामधुनी प्याबसन नगर समितिले आयोजना गरेको खेल्कुद सप्ताहमा उत्कृष्ट भएका बिध्यार्थिहरुलाई पुरस्कार बितरण गरेको छ । बिभिन्न बिधामा खेलकुद गराउदै सनिवार उत्कृष्ट बिध्यार्थिहरुलाई मेडल,ट्रफी,सिल्ड बितरण गरेको हो । सप्ताहब...
बिध्यार्थिहरुमा खेलकुद बिकासकालागी रामधुनी प्याब्सनको खेलकुद सप्ताह उद्धघाटन
सुनिल चौधरी झुम्का,माघ ११ । बिध्यार्थिहरुमा शैक्षिक संगै खेलकुद बिकासकालागी रामधुनी प्याब्सन नगर समितिले सुक्रवारबाट प्रथम खेलकुद सप्ताह सुरु गरेको छ । रामधुनीका बिभिन्न निजि बिध्यालयहरुको सहभागीतामा फुटबल,भलिवल,सय मिटर दौड प्रतियोगीताको आयोजना गरेको हो । प्याब्सन नगर समितिका अ...
थारु पुर्वज संग जोडिएको ऐतिहासिक बर्जुताल पर्यटक गन्तब्य बन्दै…..
सुनिल चौधरी गढी,पौष २५ । थारु पुर्वज संग जोडिएको बर्जुताल पर्यटक गन्तब्य बन्दै गईरहेको छ । १ सय ५० प्रजातिका चराहरु पाईने तालमा बिर्जु थारुको नामबाट नामाकरण भएको हो । जिव जन्तु आरक्षणकोलागी १६५ बिगहा जग्गामा अवस्थित ताल हालमा समिति निर्माण गरेर संरक्षण गरिरहेको छ । बिदेसि चराह...
सुनिल चौधरी झुम्का,पौष १४। दोस्रो रामधुनी गोल्डकपको उपाधि डिसिटि सुनसरीले उचाल्न सफल भएको छ । शनिवार भएको फाईनल खेलमा आयोजक रामधुनी आदर्श संस्थालाई २–० गोलले पराजित गर्दै डिसिटि सुनसरीले उपाधि जितेको हो । गोल्डकपमा प्रथम हुने समुहलाई नगद रु १ लाख १ हजार सहित सिल्ड र ट्रफिले सम्...
सुनिल चौधरी झुम्का,पौष १२ । दोस्रो रामधुनी गोल्डकप नकाउट फुटबल प्रतियोगीताको फाईनलमा आयोजक रामधुनी आदर्श संस्था बिरुद्ध डिसिटि सुनसरी भिड्ने पक्का भएको छ । बिहिवार भएको सेमिफाईनलमा डिसिटि सुनसरीले उर्लावारी फुटबल क्लव मोरंगलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाईनलको यात्रा तय गरेको...
सुनिल चौधरी झुम्का,पौष । रामधुनी आदर्श संस्थाले सनिवार भब्य रुपमा दोस्रो रामधुनी गोल्डकप उद्धघाटन गरेको छ । वडा नं. ४ स्थित सिक्दार माझि टोल ईक्राही खेलमैदानमा बिभिन्न जातजातिको झाँकि सहित उद्धघाटन गरेको हो । संस्थाका अध्यक्ष केसव बहादुर खड्काको सभापतित्वमा मल्टि शोलुसन प्रा.लि...
सुनिल चौधरी झुम्का,मंसिर २८ । बिध्यार्थिलाई चौतर्फि बिकासकालागी खेलकुदको समेत आवश्यक्ता रहेकोले फुटबल प्रशिक्षण गराईदै छ । रामधुनीका निजिबिध्यालयका बिध्यार्थिलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ(एनफा)को प्रशिक्षकद्धारा प्रत्येक सुक्रवार ३ महिना सम्म प्रशिक्षण गराईने जनाएको हो । रामधुनी प्...
झुम्कामा जेष्ठनागरीक लक्षित निशुल्क स्वथ्य शिविर
सुनिल चौधरी झुम्का,जेष्ठ ५ । उमेर ढल्किदै गएपछि स्वस्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउनेहुदा जेष्ठनागरीकहरुले झुम्कामा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षण गरेको छ । जेष्ठनागरीक सरोकार समुह सुनसरीले झुम्कामा आयोजना गरेको निशुल्क स्वथ्य सिविारबाट २ सय ५१ जनाले सेवा लिएका छन् । बिपी कोई...
सुनिल चौधरी झुम्का,बैशाख १६ । खेलकुद क्षेत्र बिकासले राष्ट्रिय समृद हुन सक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव बिष्टले भन्दै यस क्षेत्रलाई आकर्षणको रुपमा स्थापित गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । आफनो कार्यकालसम्म खेलकुद क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने सिर्जनाको अवस्थामा पुर्...